Raharaham-pirenena Archives - Page 166 sur 296 -
17/11/2017 admintriatra 0
Azo antoka ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra. Notokanan’ny Filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina niaraka tamin’ny filohan’ny Antenimeran-doholona, Rivo Rakotovao, omaly, mantsy ny tetezana vaovao tao Farahantsana-Mahitsy. Notanterahina ny fanamboarana sy famitana ity tetezana ity mba ho an’ny …Tohiny
16/11/2017 admintriatra 0
Manao tohivakana ny fanampiana avy amin’ireo firenena vahiny. Tontosa omaly, tetsy amin’ny minisiteran’ny Raharaham-bahiny (MAE), tao amin’ny efitrano fifanarahana, ny fifanaovan-tsoniam-pifanarahana teo amin’ny Fanjakana malagasy tamin’ny alalan’ny minisitry ny MAE, Henry Rabary-Njaka, ankilany, sy ny …Tohiny
Tohin’ireo ezaka efa fanaon’ny Filoham-pirenena malagasy, Rajaonarimampianina Hery mivady isan-taona, izay notanterahina omaly teny amin’ny Coliseum Antsonjombe, ny fizarana ireo “kits scolaires” ho an’ity taom-pianarana 2017-2018 ity. “Kits scolaires” miisa 60 000 no nozaraina ho …Tohiny
15/11/2017 admintriatra 0
Raikitra indray ny fizarana « kits scolaires » ataon’ny Filoha Rajaonarimampianina mivady manerana ny Nosy. Rehefa samy nahazo ny anjarany avy ireo mpianatra any amin’ny faritra sasantsasany, dia anjaran’ny eto an-drenivohitra indray no misitrika izany, androany 15 …Tohiny
« 1 … 164 165 166 167 168 … 296 »